शरीरमा यी आठ लक्षण देखिए सचेत हुनुहोस् एचआईभी हुनसक्छ !
एजेन्सी । एचआईभी / एड्स आज विश्वको लागि एक गम्भिर समस्या हो । कति विकासशील र अविकसित देशको लागि एचआईभी ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । अविकसित देश मात्र होइन विकसित देशमा पनि यो रोग धेरैको मृत्युको कारण भइसकेको छ ।
आखिर किन प्रचण्डको यति धेरै प्रसंसा गरे धमलाले ? देश विकास गर्ने नायक प्रचण्ड मात्रै (भिडियो सहित)
कृष्ण ओलीलाई सहयोग गर्न पुगेकी लोक गायिका देवी घर्तीले सकिनन् आँसु थाम्न, राजु ढकाल पनि भक्कानिए (भिडियो हेर्नुहोस)